Kuncike ekutheni izinhlelo tariff ezinikeza namuhla, abahlinzeki abaningi kazanelisi izicelo umsebenzisi kwezomnotho, iya uhlobo bahluke yesevisi, okuyinto iqashwe iseva. Ngokuvamile ngempela yimpumelelo, izinkampani ezintsha makudle kwabo okuqukethwe siqu iseva hardware yabo ezindaweni idatha ukunikeza namuhla oluthembekayo ukusingathwa umhlinzeki. Ngakho, izinkampani eziningi baphungula isidingo ulondoloza tehspetsialistov Front uma- yakhelwe ukubhekana emhlabeni iseva isevisi iwashi futhi ikhambi zonke izinhlobo imisebenzi yansuku zonke ezihlobene nokusebenza kwabo.
Kuye ikhasimende idinga ukuqinisekisa share yayo labo noma ezinye umthamo ikhiqize, kanye izicelo, abahlinzeki ibamba anganikeza ezihlukahlukene ongakhetha esibandakanya ukuqashisa iseva yesimanje. ongakhetha ezinjalo zihlanganisa izinqumo ezilandelayo:
Izinzuzo ahlinzekwa sokuqasha iseva yesimanje
Naphezu kweqiniso lokuthi nguqulo ye ngezinga elithile ngamunye sihluke kakhulu abanye ebhalwe ngenhla ngokusekelwe eBhayibhelini ngokuya izici lobuchwepheshe, zonke zibe eziningi eziwusizo ezifanayo, ezinye zazo yilezi:
A ejwayelekile isipele idatha (isipele), ngaleyo ndlela sigweme ukulahleka eyigugu Imininingwane-idatha uma kwenzeka izimo eziphuthumayo;
nokuphathwa amaseva nge ukubandakanywa nochwepheshe ukuhlinzeka amasevisi wosekelo kusuka kubanikeli ukuqinisekisa ukuthi ukusebenza kwaloluhlelo lonke, uma nje ukuqasha hardware ne-software;
kungenzeka yokwenza ukubala izindleko amasevisi, usebenzisa uhlelo nezimo;
ukusetshenziswa iziteshi eziphindaphindekayo uxhumekile bese imithombo eziphindaphindekayo kwamandla kagesi. Ngokwesibonelo, umnikeli anganikeza yokuqasha uhlobo amaseva ezikude izikhungo idatha, yesifunda besevisi, banikezwe ngokucacile of ukusebenza yasekhaya inethiwekhi kagesi, njalo ezilungele egcwele isipele ezithothene;
isinqumo noma yiziphi izinkinga ezisuka kusukela amakhasimende kanye nemvelo lobuchwepheshe zezinkinga ukubandakanywa ochwepheshe olufanele ngokushesha ngangokunokwenzeka;
amasosha omzimba ngokuphelele kusukela ekutholeni ukufinyelela okungagunyaziwe yizinkampani zangaphandle abasebenzisi ulwazi kanye amaklayenti egcinwe kwi-server ozinikele ukusebenzisa.
Ukuze sicacise ukuthi hlobo luni izici babe sokuqasha inkonzo iseva hardware kumhlinzeki ethile, ukukhetha iseva efanelekayo kubalulekile ukunquma injongo eyinhloko okuhlukile ikakhulukazi izinguqulo ngenhla isevisi. Virtual iseva abazalwa uhlelo elehlukile, Isebenza ngokuzimela amaseva angomakhelwane elise okufanayo idatha isikhungo. Lesi sici nganoma iyiphi indlela ukusebenza ngamunye abasebenzi njengengxenye isofthiwe iseva lisebenze izixazululo. Ngakho, uma ngenxa yesizathu esithile ehluleka engama omunye iseva eduze, bonke abanye baqhubeke nomsebenzi wabo ngaphandle kokuphazamiseka.
Lezi VPS-amaseva ngokuvamile ngezinga eliphezulu ngokuthembeka, osebenza kahle, kanye nokwenzeka operation eside okuqhubekayo ngemali Imininingwane lifuna ruble 800 ngenyanga.
I Radeon 6970: Uhlolojikelele, izici, ukuqhathanisa nesincintisana kanye nokubuyekeza
Yini ngiphuphe ibhubesi - iwuphawu lwamandla
Sesipholisanjini uwoyela UAZ: Izici kanye nokubuyekeza